fanontaniana Savanah S?
8 volana 4 herinandro lasa izay #1316 by [email protected]
Arahaba daholo ry rehetra ary Merry Noely! Mitadiava soso-kevitra azafady. Heveriko fa nalaiko ilay Savanah S. Manandrana manao izany P3d V4 ... Tsy afaka miseho izany rehefa manafatra ny ahy P3d? Vaovao aho P3d ary angamba tsy manao mety aho? Ary ny toro-hevitra momba ny hoe aiza sy ny fomba fahazoako azy io ary tena apetrako ao?
8 volana 4 herinandro lasa izay #1318 by [email protected]
Mila mametraka aho FSX ary asio entana ao ho azy hiasana ao P3dv4?
Misaotra anareo nandray: 24
8 volana 3 herinandro lasa izay #1328 by rikoooo
Miresaka momba ity fanampiana ity ve ianao? : www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/51/402
Raha eny, tsy mifanaraka izany P3D v4 amin'izao fotoana izao satria port-over FS2004 dia tsy afaka miasa miaraka amin'ireo simulator simba 64.
Fotoana mamorona pejy: 0.450 segondra